> Resource > Video > Sidee si ay u xumeeyaan wejiga ku Video
Waxaan leeyahay video ah oo ay dad badan waxaa lagu muujiyey, oo sidaas daraaddeed ayaan u leeyihiin si ay u xumeeyaan wejigooda ah. Waad ogtahay sida in qoraallada, qof doonayo inuu sii joogo oo aan la garaneyn ... Sidee baan u samayn karaa in?
Waa hagaag, mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaad u baahan tahay si ay u xumeeyaan wejiga in video si loo ilaaliyo arimaha gaarka ah. Si lagaaga caawiyo in aad ku gaarto in, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay noqon karaan doorasho wanaagsan. Tani waxay awood leh qalab video tafatirka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xumeeyaan qof wejigiisa qaabab kala duwan sida MOV, MP4, AVI, iyo FLV iyadoo lagu dabaqaayo "Toos off" function inay loox kasta video laga keeno. Iyada oo ka shaqeeya jir by jir sidan oo kale laga yaabo waa waqti lumis, waxaad ka heli doontaa Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa u fududahay in la isticmaalo. Hadda Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida aad si fudud u xumeeyaan wejiga karaa in video.
1 dejinta aad videos barnaamijka
Orod editor video this, iyo dooran 16: 9 ama 4: 3 saamiga si ay u galaan interface ka. Markaas riix "Import" button xitaa folder file aad, aad u hesho files bartilmaameedka oo guji "Open" si ay u dar barnaamijka. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi faylka si toos ah u furmo suuqa hoose. Marka dhammaan faylasha ayaa si guul leh ku raran la, ay la soo bandhigi doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Markaas jiidi oo iyaga iska waqtiga hoose.
2 Bilow baddalayso Wajigaaga video
Ka dib markii files la kaalinta galay waqtiga, xaq guji video iyo dooran "Power Tools". Daaqadda pop up ka, u tag submenu ah "waji Off" oo xulo "Ka codso Face Off in clip ah". Dooro mid ka mid ah wejiga iska saamaynta ka mid ah liiska. Riix OK si loo xaqiijiyo goobaha. Markaas barnaamijka si toos ah u xumeeyaan doonaa wajiga in aad video.
Mararka qaarkood shaqada la ogaado wajiga Ma laga yaabaa in 100 boqolkiiba sax ah ay sabab u tahay arrimaha sida xagal ah, nalalka, xanibaado iyo tayada video. Si loo xaliyo dhibaatada, bedesho ah "Muuse" tab iyo barbaro square ah si ay u xumeeyaan wejiga.
Hadda waxaad tahay inay awoodaan inay u dhoofiyaan file cusub iyo kuwa kale la wadaago. Halkan waxaad ka dooran kartaa dhawr hab oo wax soo saarka sida ay baahidaada:
Tag ah "Qaabka" tab iyo badbaadin video to your computer in qaab kasta oo aad rabto.
Ka dooro "Device" tab haddii aad rabto inuu u ciyaaro videos on qalabka aad mobile.
Geliyaan si ay u YouTube, Facebook iyo website aan ka tago barnaamijka.
Si toos ah gubi aad video inay DVD loogu daawashada TV-ga aad DVD guriga ciyaaryahanka.
Sida loo jar MPEG Video